Tolow maxaa jaadlaha loo laayay? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray) | Somaliland Today
← Dhaqanka Somalida, Asalka Gudniinka Firconiga Ah iyo Aragtida Islamka (Waxa soo saaray: Amplifying civil society voice on GBV coalition members in Somaliland)
DAAWO: Xildhibbaan Ka Tirsan Golaha Deegaanka Degmada Sheekh Oo Shaaciyay In Uu Ka Baxay KULMIYE Kuna Biiray Xisbiga WADDANI →
Tolow maxaa jaadlaha loo laayay? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray)
Waa su’aal is waydiin leh. Anigu ma taageersani qaadka, oo qaadka dheeftiisa iyo dhibtiisaba culumada iyo dhakhaatiirta ayaa ka hadlay, laakiin anigu dhacdadan ayaan ka hadlayaa, dadkaa aan waxba galabsan lagu xasuuqay hadafka laga leeyahay aragtidayda.
Tolow sidee ayay dhacdooyinku u socdaan, wadanku laba halbawle oo dhaqaale ayuu lahaa, mid waynu usoo taagnayan iyada oo la wareejiyay, waa dadkada Barbara, ta kalena waa qaadkaa wajaale ee la laayay dadkii ka shaqaynaayay ee isna sidaa ku xidhmay.
In labadii illood ee dhaqaale ee wadanku lahaa mid colaad ku xidhanto, midna inaga oo indhaheenu shan yihiin la wareejiyo, in ay sidaa wax u dhacaa,( is it coincidence or intentional), ma wax isku beegmaybaa mise waa qorshe, wadanka qalalaase lagu galinaayo. Iyada oo waliba xaalad kala guur inagu soo beegantahay. Waxaas oo dhan inay iska dhacaan ma caqlibaa, anigu waxaan u arkaa qorshe ah in wajigii labaad aynu galayno ee laynoogu talagalay.
Aduunyada wax isk dhacaa ma jiraan waliba arimo siyaasadee qorshe ayaa laga leeyahay, hadii aad fahamto iyo hadii kalaba.
Wajiga labaad oo ah, dadku waxay ka daaleen xisbiyadan khayaalka ah, ee kolba mid odhanaayo xisbi hebel waan ka baxay waxaanan u digarogtay xisbi hebel, iyo xisbiyadan laysku wareejinaayo ee la leeyahay reer hebel ayaanu ku wareejinay, kuwa kalana odhanayaan waanu ka gudoonay, sowtii layna lahaa waa xisbiyo qaran waa maxay waxan laysku warwareejinayaa.
Midda kale dadkuna qabyaaladii ayay ka daaleen, ninka siyaasiga ihi ku guurayay.
Mise waxay gaadhay waqtigii layna kala diraayay, kuwii ina yab yabayay ayaa qorshohoodii gaadhay, yaab.
Mise cisaabadii kolba dhinac kuu didin jirtay, kolna koonfur kolna woqooyi, ayaa waxay kuu diyaarisay wajigii labaad ee magac wadaadka lagu guuraayay, tolow qorshuhu ma sidaasaa, iyaga oo iskaga kaa dhigaya inay ku badbaadinayaan marka aad qalalasahaa aad gashid ay kuu diyaariyeen, ayay doonayaan inay shaadh wadaad kuu soo xidhaan. Illaahay baa og, laakiin waxaa cad in qorshe soo socdo, qorshahaas labadii illood ee wadanku lahaa xidhay.